IiNkonzo: Amaphepha ophando kunye neencwadi | Umvuzo weZiseko
Ikhaya Resources Uphando olupapashwe
Eli phepha lezibonelelo linikezela uludwe lwamaphepha aphambili ophando kunye neencwadi esizibhekisele kule website. Amaphepha ophando onke ashicilelwe kwiphephancwadi ehlaziywe ngontanga, okwenza imithombo ethembekileyo yolwazi.
Amaphepha adweliswe ngokulandelelana kwealfabhethi kwifani yombhali okhokelayo. Sifake izifinyezo zoqobo okanye isishwankathelo samaphepha, kunye neengcebiso zendlela yokufumana lonke iphepha.
Ukuba ufuna olunye uncedo ekufumaneni uphando, nceda ubone isikhokelo sethu Ukufikelela kuPhando.
I-Ahn HM, uChung HJ kunye no-Kim SH. I-Brain Reactivity ejongene neMidlalo yeeMidlalo Emva kwamava eMidlalo in I-Cyberpsychology, Indlela yokuziphatha kunye neNtlalo yeNtlalo, 2015 Aug; 18 (8): 474-9. I-doi: 10.1089 / cyber.2015.0185.
Abantu abadlala imidlalo ye-intanethi babonisa ngokugqithiseleyo ubuchopho obuphezulu obuphezulu kwiimpawu ezihlobene nomdlalo. Olu pho nonongo luzama ukuvavanya ukuba le mpuphu ephezulu ebonakalayo kumdlali wegeyimu yiphumo lokutshatyalaliswa ngokuphindaphindiweyo kwimidlalo ye-intanethi. Abantu abadala abasempilweni abangenayo imbali yokudlala imidlalo ye-intanethi ngokugqithiseleyo baqeshwe, kwaye bafundiswe ukuba badlale umdlalo we-intanethi kwi-intanethi yeeyunithi ze-2 / ngemini yeentsuku ezisihlanu ezilandelelanayo. Amacandelo amabini okulawula ayetyenzisiwe: iqela le drama, elijongene nomdlalo weTV, kunye neqela elingabonakaliyo, elingafumananga ukutyhila. Bonke abathathi-nxaxheba benza umsebenzi wokwenza umsebenzi ngomdlalo, umdlalo, kunye neengcamango ezingathathi hlangothi kwi-scanner engqondweni, zombini ngaphambi nangemva kweeseshoni zokutyhila. Iqela lezemidlalo libonise ukwanda kwe-reactivity kwiimpawu zegeyimu kwi-corrox ye-preferenceal cortex (VLPFC). Ukwandiswa kwe-VLPFC ukwandiswa kokusebenza kwenzelwe ukulungelelaniswa nokunyuka kwenzalo yomdlalo. Iqela leedrama libonise ukunyuka kwe-cue reactivity ekuphenduleni kwimiboniso yedrama kwi-caudate, emva kwexesha elide, kunye ne-precuneus. Iziphumo zibonisa ukuba ukugqithisa kwiimidlalo ze-Intanethi okanye kwiidrama zeTV ziphakamisa ukusetyenziswa kwezinto ezibonakalayo ezichaphazelekayo. Iipateni zokuphakama ezichanekileyo, nangona kunjalo, zibonakala zihluke ngokuxhomekeka kohlobo lwamajelo afumaneka. Ukutshintshwa kwimiba ngayinye kwimimandla kuncedisa ekuqhubekeni kwenkqubo yokufunwa kwezilwanyana.
Le nto ingemva kwe-paywall Apha. Yabona Ndifumana njani ukufikelela kuphando? ngeengcebiso malunga nokufikelela.
I-Baumeister RF noTyerney J. 2011 Ukunika amandla: Ukufumanisa kwakhona uMandla oMkhulu kunabo bonke Press Penguin. Le ncwadi inokuthengwa Apha.
I-Beyens I, iVandenbosch L kunye ne-Eggermont S Ukuboniswa kwabafana be-Adolescent Adolescence kwi-intanethi yobudlelwane bezithombe zoonobumba kwi-Pubertal Timing, Ukufunwa kweSensation, kunye nokuSebenza koMfundo in I-Journal ye-Early Adolescence, NgoNovemba 2015 vol. 35 no. 8 1045-1068. (IMpilo)
Uphando lubonise ukuba abantwana abaselula bayisebenzisa rhoqo i-intanethi ye-intanethi. Uluhlu lwesibini lwamagqabantshintshi lujolise ukuvavanya imodeli yokudibanisa kumakhwenkwe amancinci amancinane (Mage = 14.10; N = 325) ukuba (a) ichaze ukubonakala kwabo kwi-intanethi ye-intanethi ngokukhangela ubudlelwane kunye nexesha lokufunwa kunye nokufunwa kwentswelo, kwaye (b) Uphonononga umphumo wokubakho kwi-intanethi ye-intanethi ekusebenzeni kwabo kwizifundo. Umzekelo wendlela yokudibanisa ubonise ukuba ixesha lokusasaza kunye nokufunwa kwemvakalelo kuqikelelwe ukusebenzisa i-intanethi ye-intanethi. Amakhwenkwe anesigxina esiphezulu se-pubertal kunye namakhwenkwe aphakamileyo xa befuna ukusetyenziswa kwezithombe ezingcolileyo kwi-Intanethi. Ngaphezu koko, ukunyuka kwe-intanethi ye-intanethi kwandiswe ekusebenzeni kweekhwenkwezi ze-6 kwinyanga. Ingxubusho igxininise kwimiphumo yalo mzekelo wokudibanisa uphando olusasa kwi-intanethi.
Bridges AJ, Wosnitzer R, Scharrer E, Sun C, uLiberman R Ukuxhatshazwa kunye nokuziphatha ngokwesondo ekuthengiseni ngokugqithiseleyo iividiyo zoononografi: ukuhlaziywa kokuhlaziywa komxholo in Ubundlobongela Kwabesetyhini. 2010 Oct; 16 (10): 1065-85. i-doi: 10.1177 / 1077801210382866. (IMpilo)
Olu phononongo lwangoku luhlalutya umxholo weevidiyo ezibonisa amanyala, ngeenjongo zokuhlaziya ukubonakaliswa kobundlongondlongo, ukuthotywa isidima, kunye nezenzo zesondo kunye nokuthelekisa iziphumo zesifundo kwizifundo zangaphambili zohlalutyo lomxholo. Iziphumo zibonisa amanqanaba aphezulu obundlongondlongo kuzo zombini iifom zomlomo nezomzimba. Kwizigcawu ezingama-304 ezihlalutyiweyo, i-88.2% yayiqulathe ubundlongondlongo bomzimba, ukubetha, ukubamba, kunye nokubetha ngempama, ngelixa i-48.7% yemiboniso yayiqulathe ubundlongondlongo ngomlomo, ikakhulu ukubiza amagama. Abenzi bobubi babesoloko bengamadoda, ngelixa iithagethi zobundlongondlongo yayingamabhinqa ngokugqithileyo. Iithagethi zihlala zibonisa ukonwaba okanye zingaphenduli.
I-Cheng S, i-J kunye no-Missari S Imiphumo yokusetyenziswa kwe-Intanethi kwiintshukumo zokuqala zesondo kunye nobulili eTaiwan in YezoLuntu kwiNkcubeko Julayi 2014, vol. 29, akukho. 4, iphepha 324-347. i-doi: 10.1177 / 0268580914538084. (IMpilo)
Ukusetyenziswa kwe-Intanethi kunye nokunxibelelana kweejithali kuninzi luyinxalenye ebalulekileyo yobomi bentlalo eselula. Olu pho nonongo luhlola iimpembelelo zokusetyenziswa kwe-intanethi eTaiwan kwizinto ezibalulekileyo zokuziphatha kwezentlalo eziseminyakeni yobutsha: ubuhlobo bokuthandana bokuqala kunye nesondo lokuqala. Ukusebenzisa idatha esuka kwi-Project ye-Taiwan Youth (i-TYP), i-2000-2009, iziphumo zomhlalutyo womlando zivakalisa ukuba ukusetyenziswa kwe-intanethi kwiinjongo zemfundo kunciphisa amazinga okuba nobuhlobo bokuqala bokuthandana kunye ne-sex start in adolescence, ngoxa usebenzisa i-intanethi zokunxibelelana kwezentlalo, ukutyelela ii-cafés ze-intanethi, kunye nokukhenkca iiwebhusayithi zoononografi ukwandisa amaxabiso. Kukho ukungafani kobulili kwimiphumo yezinto ze-intanethi kumava amancinane abaselula. I-Logistic ihlalutya ngakumbi ibonisa ukuba imisebenzi ye-intanethi ichaphazela nokuba kungenzeka ukuba abantwana abaselula bayabelana ngesondo ngaphambi kobudlelwane bokuqala bokuthandana. Iziphumo zezi ziphumo zixutyushwa kwisigqibo.
Le nto ingemva kwe-paywall Apha. Yabona Ndifumana njani ukufikelela kuphando? ngeengcebiso malunga nokufikelela. ”> apha.
UDunkley, uVictoria 2015 Setha kwakhona ubuchopho bomntwana wakho: Isicwangciso seeveki ezine sokuphelisa ukunyibilika, ukuphakamisa amaBakala, kunye nokuPhucula iZakhono zoLuntu ngokuGuqula ifuthe leScreen-Ixesha le-Elektroniki. Paperback. IThala leNtsha leNcwadi ye-World-10: 1608682846
Inani elinyukayo labazali liyabambana nabantwana abenza ngaphandle ngaphandle kwesizathu esicacileyo. Abaninzi bala bantwana bafumaneka ukuba bane-ADHD, i-bipolar, okanye i-autism izimbande zeengxaki. Emva koko baxutyushwa kunye neziphumo ezibi kunye neempembelelo. UVictoria Dunckley ugxininise ekusebenzisaneni nabantwana kunye neentsapho ezihlulekile ukuphendula unyango lwangaphambili kwaye uphayona inkqubo entsha. Kumsebenzi wakhe kunye nabantwana abangaphezu kwe-500, abatsha, nabaselula abasifo abaneengxaki zokugula ngengqondo, iipesenti ze-80 zibonisa ukuphuculwa okuphawulekayo kwiprogram yeveki ezine echazwe apha. Izikrini ezisebenzayo, kuquka imidlalo yevidiyo, ii-laptops, iifowuni kunye neepilisi ngaphezu kokuvuselela inkqubo yesantya yengane. Ngoxa kungekho mntu kwihlabathi elixhumene nelo xesha unako ukuphepha ngokupheleleyo umonakalo wekhompyutha, u-Dunckley ubonisa indlela abasengozini kakhulu phakathi kwethu abanakho kwaye kufuneka bahlangule umonakalo
UGouin JP, uCarter S, u-Pournajafi-Nazarlooc H, i-Glaser R, i-Malarkey WB, i-Love TJ, i-Stowell J kunye ne-Kiecolt-Glaser JK Ukuziphatha komtshato, i-Oxytocin, i-Vasopressin, kunye nokuPhulukiswa kwesiLonda in Psychoneuroendocrinology. 2010 Agasti; 35 (7): 1082-1090. I-doi: 10.1016 / j.psyneuen.2010.01.009. (Ubudlelwane)
Izifundo zezilwanyana ziye zathintela i-oxytocin kunye ne-vasopressin kwintlalo yoluntu, iimpendulo zomzimba kunye nokuphilisa. Kubantu, i-oxytocin ehlala iphela kunye ne-vasopressin level covary kunye nemibono yohlobo lomtshato, ukuziphatha komtshato, kunye nezimpendulo zomzimba. Ukuphanda ubudlelwane phakathi kokuziphatha komtshato, i-oxytocin, i-vasopressin, kunye nokuphulukiswa kwesilonda, kwaye ukucacisa iimpawu zabantu ngabanqanaba abaphezulu be-neuropeptide, izibini ze-37 zangeniswa kwi-24-yeeyure yokuphanda kwi-unit. Emva kokuba amanxeba amancinci athatywe kwi-forearm, isibini sithatha inxaxheba kwinkqubo yokusebenzisana kwezentlalo. Iziza ze-Blister zihlolwe rhoqo emva kokukhutshwa ukuhlola isantya sokulungisa isilonda. Iisampuli zegazi zaqokelela i-oxytocin, i-vasopressin, kunye ne-cytokine. Amazinga aphezulu ase-oxytocin adibaniswa neendlela ezinxibelelwano ezintle ngexesha lokulungelelanisa umsebenzi. Ngaphezu koko, abantu ngabanye kwi-quartile ephezulu ye-oktotocin baphilisa amanxeba angama-blister ngokukhawuleza kunokuba abathathi-nxaxheba kwi-quarterly oxytocin quartiles. Amanqanaba e-vasopressin aphezulu ahlobene nokuziphatha okuncinci kancinci kunye ne-tumor necrosis-factor α. Ngaphezu koko, abafazi kwi-quartile ye-vasopressin quartile baphulukisa amanxeba okulinga ngokukhawuleza kunokuba kusele isampuli. Ezi nkcukacha ziqinisekisa kwaye zandise ubungqina obangaphambili obuchaphazela i-oxytocin kunye ne-vasopressin kwiziphathamandla ezinxibelelwano ezintle kunye nezimbi, kunye nokubonelela ubungqina obongezelelweyo bendima yabo kwimiphumo ebalulekileyo yempilo, ukuphulukiswa kwilonda.
Iphepha elipheleleyo lifumaneka ukukhuphela mahala Apha.
Johnson PM kunye noKenny PJ Ukunciphisa umonakalo wokunciphisa umlutha kunye nokutya okunyanzelekileyo kwiingcali ezigqithiseleyo: Umsebenzi we-dopamine i-D2 receptors in I-Nature Neuroscience. I-2010 Meyi; 13 (5): 635-641. Ishicilelwe kwi-intanethi 2010 Mar 28. I-doi: 10.1038 / nn.2519
Sifumene ukuphuhliswa kokunyanya kunxulumene nokuvela kwephutha lokulahleka kwengqondo. Utshintsho olufanayo kumvuzo we-homeostasis obangelwa yi-cocaine okanye i-heroin ithathwa njengento ebalulekileyo ekutshintsheni ukusuka kwinto yokungaqhelekanga ukuya ekuthathweni kweziyobisi. Ngoko ke, sabona ukuziphatha okunyanzelisayo njengendlela yokutya kwinqwelo elula kodwa engapheliyo, ekulinganiswa njengokutya okunomdla okunokumelana nokuphazanyiswa ngentshukumo ekhuselekileyo. I-striatal dopamine i-D2 receptors (i-D2R) yahlukunyezwa kwiinkwenkwe ezigqithisileyo, ezifana neengxelo zangaphambili kwizilonda zamachiza abantu. Ukongezelela, i-lentivirus-interactive knockdown ye-D2R yokutshatyalaliswa ngokukhawuleza yakhawuleza ukuphuhliswa kokulahlekelwa umlutha-kunye nokuqala kokutya okunyanzelekileyo okufunayo kwiigundane kunye nokufikelela okude kunokutya okunamafutha aphezulu. Ezi nkcukacha zibonisa ukuba ukugqithiswa kokutya okunomdla kunokubangela ukulutha-njengempendulo engaphenduliyo kwiinkomfa zemivuzo yobuchopho kwaye kuqhuba ukuphuhliswa kokutya okunyanzelekileyo. Iindlela eziqhelekileyo ze-hedonic zingaphumelela ukunyanya nokusetyenziswa kweziyobisi.
Eli nqaku lifumaneka mahhala Apha.
UJohnson ZV kunye noLn Young Iinkqubo ze-neurobiological zokunxulumana nentlalo kunye nokubambisana ngokubini kwiNgxelo yangoku in ZeNzululwazi. 2015 Jun; 3: 38-44. I-doi: 10.1016 / j.cobeha.2015.01.009. (Ubudlelwane)
Iintlobo ziye zaguquka ukuziphatha kweentlalo ezahlukeneyo kunye nezicwangciso zokuxubusha ekuphenduleni imikhosi ekhethiweyo kwiindawo zazo. Nangona ukuziphatha kakubi kubaluleke kakhulu kwisicwangciso sokuqhawula ngokubanzi kwi-taxa eninzi ye-vertebrate, i-convergent i-systems ye-mating systems yenzeke ngokuphindaphindiweyo kwiimida ezikude. Ukuziphatha kwendoda enomzimba kucatshangelwa ukuba kuququzelelwe amandla okwenza i-neurobiological ukwenza kunye nokugcina iinkcukacha ezinxulumene noluntu, okanye izibophelelo zokubambisana, kunye nomlingani odibeneyo. Iinkqubo ze-neural zokuziphatha ngokubambisana ziye zaphandwa ngokugqithiseleyo kwiinkompo ze-Microtine, ezibonisa imibutho eyahlukeneyo yentlalo. Ezi zifundo ziye zagqamisa iindlela ze-dopamine ze-mesolimbic, i-neuropeptides ezentlalo (i-oxytocin ne-vasopressin), kunye nezinye iinkqubo ze-neural njengemibandela ebalulekileyo ekubunzeni, ukugcinwa, nokubonakalisa izibophelelo ezimbini.
Iphepha elipheleleyo lifumaneka kwi-intanethi mahhala Apha.
Kastbom, AA, Sydsjö G, uBladh M, Priebe G, kunye noSvedin CG Ukuqala kwezesondo phambi kwexesha le-14 kukhokelela kwimpilo yengqondo engentle kunye nokuziphatha okungengozini kwimpilo kamva in Acta Paediatrica, Umqulu 104, I-1, iphepha 91-100, uJanuwari 2015. INGXELO: 10.1111 / apa.12803. (IMpilo)
Injongo: Olu pho nonongo luhlolisise ubudlelwane phakathi kokuqala kwezesondo ngaphambi kweminyaka eyi-14 yobudala kunye neentlalo zabantu, amava ezesondo, impilo, amava okuxhaphazwa kwabantwana kunye nokuziphatha kwi-18 yeminyaka ubudala.
Izindlela: Isampula se-3432 abadala baseSweden abasesikolweni esiphakeme bagqiba uphando malunga nobulili, impilo kunye nokusetyenziswa kakubi kwi-18.
Iziphumo: Ibhloko lokuqala lalingqinelana kakuhle neendlela zokuziphatha ezinobungozi, ezifana nenani lamalingani, amava omzimba wesondo kunye nomntu olwabelana ngesondo, iimpawu zokuziphatha, ezifana nokubhema, ukusetyenziswa kweziyobisi kunye nokusetyenziswa kakubi kotywala, nokuziphatha kakubi, njengobundlobongela, ukuxoka, ukuba ubalekela ekhaya. Amantombazana anesifo sokuqala ngokwesondo ayenamava amaninzi kakhulu ekuhlaselweni ngokwesondo. Abafana abanesifo sokuqala ngokwesondo banokuthi banokungqinelani, ukuzithemba okuphantsi kunye nempilo yengqondo embi, kunye namava okuxhaphazwa ngokwesondo, ukuthengisa ngesondo kunye nokuxhaphazwa ngokomzimba. Imodeli emininzi yokuguqulwa komzimba ibonisa ukuba izenzo ezininzi zokungahambisani nokuziphatha kunye nokuziphatha kwempilo zahlala ziphawulekayo, kodwa ekuqaleni kokuqala ngokwesini akuzange kwandise ingozi yempawu zengqondo, ukuzithoba okanye ukuziphatha okuphantsi kwexesha le-18 ubudala.
Isiphelo: Ukuqala kwezesondo zangaphambili kwakunxulumene neendlela eziphathekayo ngexesha lokukhula, kwaye oku kubangelwa kukukhathalela kubazali kunye nababoneleli bezempilo.
Umbhalo opheleleyo wale nqaku ukhona Apha.
UK, Liu TL, Wang PW, Chen CS, Yen CF kunye neYen JY Ukuxakeka koxinzelelo, ubundlobongela kunye nokuxhalaba kwezenhlalakahle kwiinkqubo zokuxhatshazwa kwe-Intanethi phakathi kwabaselula. in Psychiatry epheleleyo Umqulu 55, I-6, i-1377-1384. I-Epub 2014 Meyi 17. I-doi: 10.1016 / j.comppsych.2014.05.003. (IMpilo)
IINKCUKACHA: Kwiintsholongwane zabantu emhlabeni wonke, ukuxilwa kwe-intanethi kudlalele kwaye kudla ngokubandezeleka ngokuxinezeleka, ubundlobongela kunye nokuxhalaba kweentlalo zabantu abaselula. Olu pho nonongo lujolise ekuhloliseni ukwanda koxinzelelo, ubundlobongela, kunye nokuxhalaba kwezenhlalakahle ngexesha lokufumana umlutha kwi-intanethi okanye ukuxhomekeka kwi-intanethi kwintsholongwane.
INDLELA: Olu phofu lufunyenwe i-2,293 ebusheni kwiBakala 7 ukuvavanya ukuxinezeleka, ubundlobongela, ukuxhalaba kweentlalo kunye nokulutha kwe-Intanethi. Uvavanyo olufanayo luphindaphindiwe emva konyaka. Iqela leziganeko lachazwa njengezifundo ezichazwe njengezingekho umlutha ekuhloleni kokuqala kwaye njengomlwelwe kuvavanyo lwesibini. Iqela lokuxoxwa lichazwe njengezifundo ezichazwe njengezilweliso ekuhloleni kokuqala kwaye njengokuba zingekho umlutha kwisibini kuhlolo.
IINKCUKACHA: Iqela leziganeko libonise ukudakumba okwenyukayo kunye nobutsha ngaphezu kweqela elingekho umlutha kunye nemiphumo yokudakumba kwakunamandla nakwiintombazana eziselula. Ukongezelela, iqela lokuxolela liye lanciphisa ukuxinezeleka, ubundlobongela, kunye nokuxhalabisa kwezenhlalo ngaphezu kweqela eliluthayo lokulutha.
IMISEBENZI: Ukudandatheka kunye nobutsha buyingozi ngakumbi kwinkqubo yokuxilisa i-Intanethi phakathi kwabaselula. Ukungenelela kwe-intanethi kulindeleke ukuba kunikwe ukukhusela impembelelo engalunganga kwimpilo yengqondo. Ukuxinezeleka, ubundlobongela, kunye nokuxhalaba kwezenhlalakahle kwehla kwinkqubo yokuxolelwa. Yacetyisa ukuba imiphumo emibi ingaphendulwa ukuba ukukhwabanisa i-Intanethi kungakhululwa ngexesha elifutshane.
UKühn, S kunye noGallinat J Ukwakhiwa kweBongo kunye nokuQhagamshelana okuSebenzayo Ukudibanisa kunye neZonografi Ukusetyenziswa: Ubunono kwi-Porn in JAMA Psychiatry. 2014; 71(7):827-834. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.93.
Kubaluleka: Njengoko i-pornography ibonakala kwi-Intanethi, ukufikeleleka, ukufikeleleka, kunye nokungaziwayo kokusebenzisa isicatshulwa esinikwayo ngokwesini kwandisiwe kwaye kwandula izigidi zabasebenzisi. Ngokusekelwe ekucingeni ukuba ukusetyenziswa koonografi kufana nokuziphatha okufuna umvuzo, ukuziphatha okufunayo, kunye nokuziphatha komlutha, senze iingxaki zokuguqula inethiwekhi ye-frontostriatal kubasebenzisi abaninzi.
Injongo: Ukuchonga ukuba ukusetyenziswa kweentlophu zoononophelo rhoqo kuhambelana nenethiwekhi ye-frontostriatal.
Ukuyila, ukubeka, kunye nabathathi-nxaxheba Kuhlolisiso olwenziwe kwi-Max Planck Institute for Development Human eBerlin, eJamani, abantu abadala base-64 abanempilo ebuninzi beentlobo ezahlukeneyo zokusetyenziswa kweentlophu zoononophelo ezichazwe kwiiyureli zokusetyenziswa kwamanyala ngeveki. Ukusetyenziswa kwezithombe zoonografi kwakunxulumene nesakhiwo se-neural, ukusebenza okuhlobene nomsebenzi, kunye nokusebenza kokuphumla kombuso.
IziPhumo eziPhambili kunye neMilinganiselo Imilinganiselo emalunga nobuchopho yayilinganiswa nge-voxel-based based morphometry kunye nokuphumla komsebenzi wokusebenza kombuso kwalinganiswa kwi-3-T i-scontic scontic scontic scans scans.
Iziphumo Sifumene ubudlelwane obubi phakathi kweeyure zoonografi ezixeliweyo ngeveki kunye nevolumu yento engwevu kwi-caudate elungileyo (P <.001, ilungiswe ngokuthelekisa okuninzi) kunye nomsebenzi osebenzayo ngexesha lesini-sokuphinda sisebenze kwiparadigm yasekhohlo ( I-P <.001). Umsebenzi wokunxibelelana kwe-caudate yasekunene kwi-cororsx yangaphambili ye-dorsolateral yayihambelana kakubi neeyure zokusebenzisa iphonografi.
Izigqibo kunye nokuBaluleka Ukubambisana kakubi kokusetyenziswa kweentlophu zozongcolileyo ngokuzenzekelayo ngevolatum (i-caudate) volume, ukusebenza kwe-left striatum (putamen) ngexesha lokusetyenziswa kwe-cue, kunye nokuxhumeka komsebenzi ophantsi kwe-caudate efanelekileyo kwi-cororx ye-dorsolateral prefrontal ingabonakalisa utshintsho kwi-neural i-plasticity ngenxa yokuvuselela okukhulu kwenkqubo yokuvuza, kunye ne-modulation ephezulu-phantsi ye-prefrontal cortical areas. Ngenye indlela, ingaba yinto eqhelekileyo eyenza ukusetyenziswa koonografi kuvuze ngakumbi.
Lambert NM, Negash S, Stillman TF, Olmstead SB, kunye neFincham FD Uthando olungapheliyo: Ukusetyenziswa koonografi kunye nokuzibophelela okunyanzelekileyo kumlingani womntu othandana naye in Umbhalo wezeNtlalo kunye neZiklinikhi zeengqondo: Vol. 31, No. 4, iphe. 410-438, 2012. I-doi: 10.1521 / jscp.2012.31.4.410. (IMpilo)
Sihlolisise ukuba ukusetyenziswa koononografi kuchaphazela ubudlelwane bokuthandana, ngokulindela ukuba amanqanaba aphezulu okusetyenziswa kwezithombe ezingamanyala ahambelana nokuzibophelela ekuziphatheni komntu omdala. Isifundo se-1 (n = 367) sifumene ukuba ukusetyenziswa kwamanyala angaphezulu kweentlobo zoonografi kuhambelana nokuzibophelela okuphantsi, kunye noFundo lwe2 (n = 34) luchaza oku kufunyenwe ngokusebenzisa idatha yolwazi. Isifundo se-3 (n = 20) abathathi-nxaxheba babekwe ngokulandelelana ukuba bangaziboni izinto ezingcolileyo okanye umsebenzi wokuzilawula. Abo baqhubeka besebenzisa imifanekiso engamanyala bavakalisa amanqanaba aphantsi okuzibophezela kunokuba bathathe inxaxheba. Kwisifundo 4 (n = 67), abathathi-nxaxheba abadla amanqanaba aphezulu eonografi bethandana ngakumbi kunye nomlingane ogqithiseleyo ngexesha le-intanethi. Isifundo se-5 (n = 240) sifike ukuba ukusetyenziswa koonografi kwakunxulumene ngokuqinisekileyo nokungathembeki kwaye lo mbutho wadibanisa ngokuzinikela. Ngokubanzi, umzekelo ohambelanayo weziphumo ufunyenwe usebenzisa iindlela ezahlukeneyo ezibandakanya izicwangciso ze-cross-sectional (Study 1), ukuqwalasela (Study 2), ukuhlola (i-Study 3), kunye nokuziphatha (i-Studies 4 kunye ne-5) idatha.
ULevin ME, uLillis J noHayes SC Xa i-pornography e-intanethi ibheka njani ingxaki phakathi kwamadoda aseKholeji? Ukuhlolisisa indima ejongene nokuzikhusela in Ukunyanzelwa ngokwesondo kunye nokunyanzelwa: Ijenali yonyango kunye nothintelo. Umqulu 19, I-3, i-2012, iphepha 168-180, I-DOI: 10.1080 / 10720162.2012.657150. (IMpilo)
Ukubukela iinthombe zoononophala kwi-Intanethi kuqhelekile phakathi kwamadoda asekholejini, kodwa akucaci ukuba ngaba ukujonga okunjalo kuyinkinga. Enye inokuthi inokuthi i-akhawunti ibone ingxaki ekujongeni ukuphepha: ukufuna ukunciphisa ifom, ubukhulu okanye ubunzulu bobuchule bamava abucala nangona ukwenza njalo kubangela ukulimala kokuziphatha. Uphononongo lwangoku luhlolisise ubudlelwane be-intanethi yokubukela kunye nokukhuselwa kweengxaki kwiinkalo zeengxaki zengqondo (ukuxinezeleka, uxhalaba, uxinzelelo, ukusebenza kwezenhlalakahle kunye neengxaki ezinxulumene nokubukela) ngophando olwenziwe kwi-intanethi eyenziwa nge-sampuli engekho I-157 yabafundi beekholeji zeekholeji. Iziphumo zibonise ukuba ubude bokubukela bekunxulumene kakhulu noluhlu oluthile lweengqondo, njengokuba ukujonga okungakumbi kuhlobene neengxaki ezinkulu. Ukongezelela, ukuphepha ukuvavanya ubuhlobo phakathi kokubukela kunye neenguqu ezibini zengqondo, ezifana nokujonga ukuxhalabisa kunye neengxaki ezinxulumene nokubukela kuphela kwabathathi-nxaxheba ngamanqanaba ekliniki wokuphepha. Ezi ziphumo zixutyushwa kumxholo wophando malunga neendlela zokuphepha nokufumana unyango olujolise kule nkqubo.
Uthando T, Laier C, uM Brand, Hatch L kunye noHajela R I-neuroscience ye-Intanethi yezoLimo: Ukuhlaziya nokuhlaziywa in ZeNzululwazi 2015, 5 (3), 388-433; i-doi: 10.3390 / bs5030388. (IMpilo)
Abaninzi bayaqaphela ukuba iimpawu ezininzi ezinokuchaphazela umjikelezo wesiphaluka ebuntwini buntwini zikhokelela ekulahlekelweni kokulawula kunye nezinye iimpawu zokulutha umlingo ubuncinane kwabanye abantu. Ngokubhekiselele kumlutha we-intanethi, uphando lwe-neuroscience lugxininisa ukucinga ukuba iinkqubo ze-neural ezisemgangathweni zifana nokuxhatshazwa kweziyobisi. Umbutho we-American Psychiatric Association (APA) uqaphele ukuziphatha okufanayo kwe-intanethi, ukudlala kwe-intanethi, njengokuba ingxaki yokulutha umlingo ifuna ukuqhubeka nokufundisisa, kwi-2013 ukuhlaziywa kweNcwadana yabo yokuThengisa kunye neStatistical. Ezinye iindlela ze-Intanethi eziphathekayo, umz Kule ngongoma, sinika isishwankathelo seengcamango ezicetywayo kunye nokunika ingqwalasela malunga nezifundo zesayensi kwi-intanethi ye-intanethi kunye ne-intanethi yokudlala i-Intanethi. Ngaphezu koko, sihlolisise uphando lwe-neuroscientifi kwi-intanethi ye-intanethi kunye nokudibanisa iziphumo kumzekelo wokuxhatshazwa. Ukuphononongwa kukukhokelela ekugqibeleni ukuba ulwaphulo-mthetho lwe-intanethi e-intanethi lufikelela kwisakhelo soxhathozo kwaye lukwabelana ngeendlela ezifanayo ezisisiseko kunye nokulutha kweziyobisi. Kanye kunye nezifundo kwi-intanethi ye-intanethi kunye ne-Intanethi ye-Gaming Disorder sibona ubungqina obunzulu bokuqwalasela ukuziphatha kwe-Intanethi njengemilutha yokuziphatha. Uphando lwexesha elizayo ludinga ukujongana nokuba okanye akukho na ukungafani okwenene phakathi kwezilwanyana kunye nokuziphatha okubi.
Le nto ifumaneka ngokugcwele mahhala Apha.
Luster SS, uNelson LJ, uPoulsen FO, Willoughby BJ Iimvakalelo zokuziphatha zesondo zabantu abadala kunye neendlela ezithintekayo zokuziphatha ngokwesini? in Abadala abakhulayo. 2013 Sep 1; 1 (3): 185-95. (Ekhaya)
Izifundo ezininzi ziye zabonisa indlela iintloni ezichaphazela ngayo abantu ebuntwaneni nasebuntwaneni; Nangona kunjalo, into encinci iyaziwa malunga nemiphumo enokuthi ibe nayo ekukhuleni kwabantu abadala. Olu pho nonongo luye lwaqwalasela indlela ukuhlazeka kunokudibaniswa neengcinga zesondo kunye nokuziphatha kwabafana nabasetyhini abadala. Abathathi-nxaxheba babandakanye abafundi be-717 kwiindawo ezine zeekholeji ngaphesheya kweUnited States, ababaninzi abasetyhini (i-69%), i-European American (69%), abangatshatanga (100%), nabahlala ngaphandle kwekhaya labazali (90%). Iziphumo zacetyiswa ukuba udlwengulo ludibanise ngokufanelekileyo kunye nesimo sengqondo sobuntu (ukubonisa imibono enobungqina obukhulu) kubantu kodwa iintloni zidibanisa kakubi neengqondo zesini kubafazi. Udlwengulo lwalunxulumene nokuziphatha ngokuzimeleyo koxhatshazo kunye nokusetyenziswa koononografi kusetyenziswa amadoda. Iintloni zaxhatshazwa kakubi kunye neentlobano zokuziphatha zesondo (umtshato kunye noncoital) kunye nenani labalingani bexesha elizeleyo labasetyhini. Impembelelo kwezi ziphumo zixoxwa ngazo.
Maddox AM, Rhodes GK, uMarkman HJ Ukujonga Izinto ezicacileyo zobulili kuphela okanye kunye kunye: Amashishini noBuchule boBudlelwane in Ukwabelana ngesondo ngoBhahav. 2011 Apr; 40(2):441–8.
Olu pho nonongo luhlolisise imibutho phakathi kokubukela izinto eziphathekayo ngokwesini (SEM) kunye nolwalamano olusebenzayo kwisampula esingahleliyo se-1291 abantu abangatshatileyo ubudlelwane bokuthandana. Amadoda amaninzi (i-76.8%) kunabesifazana (i-31.6%) babike ukuba bajonga i-SEM ngokwabo, kodwa malunga nesiqingatha sabasetyhini nabasetyhini babika ngamanye amaxesha bajonga i-SEM kunye neqabane labo (44.8%). Amanyathelo oonxibelelwano, ukulungiswa kobudlelwane, ukuzinikela, ukwaneliseka ngokwesondo kunye nokungathembeki kwahlolwa. Abantu abangakhange bajonge i-SEM bavakalise ubuhlobo obuphezulu obuphezulu kuzo zonke iintsikelelo kunabo bajonga i-SEM yodwa. Abo bajonga i-SEM kuphela kunye namaqabane abo babikezela ukuzinikezela ngakumbi kunye nokwaneliseka okwenziwe ngokwesondo kunabo bajonga i-SEM yodwa. Ukwahlukana kuphela phakathi kwabo bangakhange bajonge i-SEM kunye nalabo bawajonga kuphela ngamaqabane abo kukuba abo bangakhange bajonge babe nezinga elingaphantsi lokungathembeki. Impembelelo yophando lwangomso kule ndawo kwakunye nokunyangwa kwezesondo kunye neengxaki zonyango zixutyushwa.
Negash S, Sheppard NV, uLambert NM kunye neFincham FD Ukurhweba kamva Imiphumo yokuzonwabisa okwangoku: Ukusetyenziswa koonografi nokukhawuleza Ukunciphisa in Umbhalo woPhando loSondo, 2015 Aug 25: 1-12. [Epub ngaphambi kokuprinta]. (IMpilo)
Imifanekiso engamanyala kwi-Intanethi yimboni yezigidigidi yeedola eye ikhula ngokufikelelekayo. Ukucothiswa kwezaphulelo kubandakanya ukunciphisa amaxabiso amakhulu, kamva umvuzo ngenxa yokuncipha, umvuzo okhawulezileyo. Ubunewunewu obuhlala buhleli kunye nobukhulu besimo sezesondo njengemivuzo eyomeleleyo yendalo yenza iphonografi kwi-Intanethi isebenze ngendlela eyahlukileyo kwinkqubo yomvuzo wobuchopho, ngaloo ndlela ineempembelelo kwiinkqubo zokwenza izigqibo. Ngokusekwe kwizifundo zethiyori yezenzululwazi yendaleko kunye neuroeconomics, izifundo ezimbini zavavanya ingcinga yokuba ukusebenzisa iphonografi kwi-Intanethi kuyahambelana namazinga aphezulu okulibaziseka kwezaphulelo. Isifundo se-1 sisebenzise uyilo olude. Abathathi-nxaxheba bagqibile ukusebenzisa iphonografi kwiphepha lemibuzo kunye nokulibaziseka kwesaphulelo kwiXesha 1 kwaye emva kweeveki ezine kwakhona. Abathathi-nxaxheba baxela ukusetyenziswa kwamanyala okuqala okuphezulu kubonise izinga lokuncitshiswa kokulibaziseka kwiXesha 2, ukulawula isaphulelo sokuqala sokulibaziseka. Isifundo 2 sivavanyelwe ubungqangi kuyilo lokulinga. Abathathi-nxaxheba babelwa ngokulandelelana ukuba bayeke okona kutya bakuthandayo okanye iphonografi iiveki ezintathu. Abathathi-nxaxheba abaye bayayeka ekusebenziseni iphonografi babonisa isaphulelo sokulibaziseka esisezantsi kunabathathi-nxaxheba abayeka ukutya abakuthandayo. Ukufumanisa kuphakamisa ukuba i-intanethi ye-intanethi ngumvuzo wesondo obangela ukulibaziseka ukuphuculwa ngokungafaniyo neminye imivuzo yemvelo. Ithiyori kunye nefuthe lonyango kwezi zifundo ziyaqaqanjiswa.
Le nto ingasemva kwe-paywall Apha. Yabona Ndifumana njani ukufikelela kuphando? ngeengcebiso malunga nokufikelela.
Ng JYS, Wong ML, Chan RKW, Sen P, Chio MTW, kunye no-Koh D Ukwahlukana kobulili kwizinto ezinxulumene nobudlelwane bezobulili phakathi kwama-Adolescents of Heterosexual Adolescents in ESingapore kwi-AIDS Education and Prevention, 2015, Vol. 27, No. 4, iphe. 373-385. I-doi: 10.1521 / aeap.2015.27.4.373. (IMpilo)
Ukusebenzisa uphando olunqamlezileyo, sihlolisise ukungafani kobulili ekudlukeni kwezinto kunye neziganeko ezinxulumene nesondo lesandulela phakathi kwabaselula abaya kwiklinikhi ye-STI kuphela e-Singapore. Iinkcukacha zaqokelelwa kuma-1035 asebuntwini abaneminyaka engama-18 ubudala kunye ne-14 kwaye bahlaziywa basebenzisa i-Poisson regression. Ukuxhaphaka kwesondo sokulala kwaba ngu-19%, kunye nabesifazane abakhulu (28%) kunabesilisa (32%) abaye bahlala kuyo. Kuhlalutyo oluninzi, izinto ezinxulumene nobulili bobulili bobabini bobulili bomlomo kunye nokungabikho kokuqhawula ngokwexesha lokulala ngesondo sokugqibela. Kuba besilisa, ubulili bobulili bexhatshazwa babunxulumene nobuncinane bokuqala kwesondo kunye nokulawulwa kwangaphandle okubonakalayo. Phakathi kwamabhinqa, kwadibaniswa kunye namazinga avukelekileyo kunye nokungaqiniseki ukunyanzela uxinzelelo lwabazalwana ukuba bahlanganyele ngesondo. Ukusetyenziswa kwekhondomu ehambelanayo ye-sex anal sex kwaba ngu-23% kunye ne-22% yabesilisa nabesifazane, ngokulandelanayo. Iiprogram zokuthintela i-STI zentsholongwane kufuneka zijongane ngesini esinikwa ngumntu wesini, sibe ngesini, kwaye ziqwalasele iimpawu zobuntu.
Inqaku elipheleleyo lilandela i-paywall Apha. Yabona Ndifumana njani ukufikelela kuphando? ? Ngeengcebiso zokufikelela.
Peters ST, Bowen MT, Bohrer K, McGregor IS kunye ne-ID ye-Neumann I-Oxytocin inhibisa ukusetshenziswa kwe-ethanol kunye nokukhululwa kwe-dopamine ye-ethanol kwi-nucleus accumbens in Ubunzima beBilo. Inqaku lokuqala lipapashwe kwi-intanethi: 25 Januwari 2016, DOI: 10.1111 / adb.12362. (Ubudlelwane)
Utywala (ETOH) yenye yezilwanyana ezinonophelo kakhulu zokuzonwabisa kunye neyona nto inobungozi. Nangona kunjalo, ukhetho lwangoku unyango lweengxaki zokusetyenziswa kotywala ngokuqhelekileyo lunokusebenza ngokuthe ngcipheko kunye nolwaphulo oluhle kuluntu. Kulo mongo, i-neuropeptide i-oxytocin (i-OXT) ifumaneke njengendlela ekhombisayo yokwenza unyango ngenani lezinto zokusebenzisa izidakamizwa, kuquka utywala. Ukusetyenziswa kwe-OXT ekunciphiseni ukusetyenziswa kunye nokulangazelela ubuninzi bezinto ezinokuthi kunakho ukukwazi ukulungelelanisa iziphumo ze-neurochemical kwi-eyelimbic dopamine endleleni. Nangona kunjalo, impembelelo ye-OXT kwizenzo ze-EtOH kule ndlela ayisayi kuphandwa. Apha, sichaza ukuba i-OXT (1 μg / 5 μl) i-OOH (20 μg / 59 μl) ithintela ngokuzithandela i-EtOH (i-28 ipesenti) ukuzimela emva kokufikelela okungapheliyo kwi-EtOH kwii-1.5 iintsuku (ii-15 zokutya). Emva koko, sibonise ukuba i-intohperumoneal (ip) injection ye-EtOH (i-10 g / kg, i-XNUMX ipesenti w / v) inyukisiwe ukukhululwa kwe-dopamine ngaphakathi kwe-nucleus eqokelelwe kwiinkwenkwezi ze-EtOH-naive kunye neerati ezifumene i-XNUMX yentsholongwane ye-ip yansuku zonke ye-EtOH . I-Icv OXT ivalwe ngokupheleleyo i-EtOH-eyenza ukukhululwa kwe-dopamine kuzo zombini i-EtOH-naive ne-rats. Ukuncitshiswa kwe-EtOH-kubangelwa ukukhululwa kwe-dopamine yi-OXT kunokunceda ukucacisa ukunciphisa u-EtOH ukuzilawula ngokubhekisele kwi-OX ye-infusion.
Bona iphepha elipheleleyo Apha. Le nto ingasemva kwe-paywall. Yabona Ndifumana njani ukufikelela kuphando? ngeengcebiso malunga nokufikelela.
IPizzol, D., uBertoldo, A., kunye no-Foresta, uC. Iintsholongwane kunye noonobumba be-intanethi: ixesha elitsha lokwabelana ngesondo in I-International Journal Yonyango LwezeMntwana kunye neMpilo Aug 7 2015. pii: /j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2015-0003/ijamh-2015-0003.xml. I-doi: 10.1515 / ijamh-2015-0003. (IMpilo)
IINKCUKACHA: Iifoto zoonografi ziyakuchaphazela indlela yokuphila yabantwana abaselula, ngokubhekiselele kwimikhwa yabo yobulili kunye nokusetyenziswa koonwabo, kwaye inokuba nempembelelo ebonakalayo kwisimo sengqondo sabo sengqondo kunye nokuziphatha kwabo.
INJONGO: Injongo yale sifundo kwakuyikuqonda nokuhlalutya ubude, ubude kunye nokuqonda kwindlela yokusetyenziswa kwezilwanyana ze-intanethi eziselula ezisemgangathweni.
IINKCUKACHA NENKQUBO: Inani elipheleleyo labafundi abayi-1,565 ababeye kunyaka wokugqibela wesikolo esiphakamileyo babandakanyeka kolu phando, kwaye i-1,492 ivumile ukugcwalisa uphando olungaziwayo. Imibuzo emele umxholo wale sifundo yayi: 1) Ufikelela kangaphi kwiwebhu? 2) Uhlala ixesha elingakanani uxhulumene? 3) Ngaba uqhagamshela kwiindawo ezingamanyala? 4) Ufikelela kangaphi kwiindawo ezingamanyala? 5) Uchitha ixesha elingakanani kuzo? 6) Uhlala uhlambalaza? kwaye 7) ukujonga njani ukuhambela kwezi ndawo? Uhlalutyo lweenkcukacha-manani lwenziwa ngovavanyo lukaFischer.
IINKCUKACHA: Bonke abantu abaselula, malunga nentsuku zonke, banokufikelela kwi-Intanethi. Phakathi kwalabo bahlolisisiweyo, i-1,163 (77.9%) yabasebenzisi be-intanethi bayavuma ukusetyenziswa kwezinto eziphathekayo zobulili, kunye nezo, i-93 (8%) yokufikelela kwiiwebhusayithi zoononopopasho imihla ngemihla, i-686 (59%) abafana abafikelela kwezi ziza baqonda ukusetyenziswa koonografi njengoko Ukukhuthaza, i-255 (21.9%) ichaza njengesiqhelo, i-116 (10%) ibika ukuba inciphisa inzala yezocalulo kubalingane bobomi be-real-life, kwaye i-106 ekhoyo (9.1%) ibonisa uhlobo lomlutha. Ukongezelela, i-19% yabathengi bonkcobo bavakalisa impendulo engavumelekanga ngesondo, ngelixa ipesenteji iphakanyiselwe ku-25.1% phakathi kwabathengi abaqhelekileyo.
IMISEBENZI: Kubalulekile ukufundisa abasebenzisi bewebhu, ingakumbi abasebenzisi abancinci, ekusebenziseni ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo kwe-Intanethi kunye neziqulatho zayo. Ngaphezulu koko, iiprogram zemfundo kawonkewonke kufuneka zinyuswe kwinani kunye nexesha lokuncedisa ukuphucula ulwazi lweengxaki zesondo ze-intanethi kunye nabantwana abakwishumi elivisayo kunye nabazali.
Inqaku elipheleleyo lilandela i-paywall Apha. Yabona Ndifumana njani ukufikelela kuphando? Ngcebiso malunga nokufikelela.
I-postman N ne-Postman A (Isingeniso) Ukuzihlekisa Ekufeni: Intetho Yomphakathi Ngexesha Lokubonisa Ibhiziniselwano I-Paperback, i-20th Edition ye-Anniversary Edition, iphepha le-208 2005 nge-Penguin Books (okokuqala kupapashwe 1985). I-ISBN 014303653X (ISBN13: 9780143036531) (ixhomekeke)
Ukushicilelwa okokuqala kwi-1985, i-Neil Postman yomhlaba ophazamisayo ngemiphumo ebuhlungu yomsakazo kwizepolitiki nakwiintetho zentlanga iye yanyiswa njengencwadi yenkulungwane yeshumi elinesi-yokuqala eyapapashwa kwinkulungwane yeshumi leminyaka. Ngoku, ngomabonwakude ohlangene nemithombo ye-elektroniki eyinkcazo-evela kwi-Intanethi ukuya kwiifowuni kwiiDVD-sele ithathe ibaluleke ngakumbi. Ukuzixhalabisa Ekufeni Kubukeka kwiprofeto kwinto eyenzekayo xa ezopolitiko, i-journalism, imfundo, kunye neenkolo zixhomekeka kwiimfuno zokuzonwabisa. Kwakhona yiplani yokubuyisela ukulawulwa kweendaba zethu, ukuze bakwazi ukulungiselela iinjongo zethu eziphezulu.
UPratt R. noFernandes C Indlela Iidrafiya ezinokuthi zichithe ngayo ukuVavanywa koMngcipheko wabantwana kunye nabantwana abasebekhulile abanobubi ngokwesondo in Abantwana base-Australia, Umqulu 40 I-03, Septemba 2015, iphepha 232-241. INGXELO: 10.1017 / cha.2015.28. (IMpilo)
Kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo, ukwamkelwa "kokunikwa" kokuvavanywa kokuziphatha gwenxa ngokwesondo kunye nonyango kukuba imeko yesondo yenziwe nzulu, kokukhona iindlela zokuziphatha kwabakwishumi elivisayo zinokubakho, ngokuqhubela phambili ukusuka kuhlaselo oluncinci ukuya kuthi ga ezinzulu, isenzo sokungenelela. Sicinga ukuba ulutsha olubandakanyeka ekuziphatheni gadalala ngokwesondo kunokuba kubonakalise ukungabinakho ukwenzakala kwabo, ngelixa befuna ukubandakanyeka kwizenzo ezigwenxa ezibukhali ukuze bafumane inqanaba lokuvusa ekufezekisweni kwasekuqaleni ngezenzo ezincinci. Olu luvo lubonisa ubudlelwane obunokubakho phakathi kwexesha lokuziphatha gwenxa ngokwesondo; ubungqongqo bokuziphatha kunye nobude bonyango olufunekayo ukulawula nokunyanga umba.
Ngaba ukusetyenziswa koonobumba beentlobo zoononophelo kunokuchaphazela uvavanyo kunye nokonyango kolutsha olwenzakalisa ubulili? Ingaba ubuhlobo bukhona phakathi kobunzima kunye nokunyanzeliswa kwezenzo zokuhlaselwa ngokwesondo, okanye ukubukela iphonografi nokuphinda kwakhona kwenziwe oko kwabukwa kwatshintshile lobu buhlobo? Eli nqaku liphonononga uninzi lwezi themes kunye nemibuzo.
Inqaku elipheleleyo lilandela i-paywall Apha. Yabona Ndifumana njani ukufikelela kuphando? ngeengcebiso malunga nokufikelela.
Ukufumana uRC, Davtian M, uLenartowicz A, Torrevillas RM, Fong TW Iimpembelelo ekuhlolweni nasekunyango kwa-ADHD yabantu abadala in Neuropsychiatry. 2013 Jun 1; 3 (3): 295-308. (Ekhaya)
Eli nqaku liphonononga umzimba okhoyo wangoku uphando kwi-ADHD yabantu abadala kunye nokuziphatha koxhatshazo. Ukujonga kwimibono evela kwiinkalo zengqondo kunye neuroscience, iziphakamiso eziliqela zinikezelwa ukuchaza ukuba kutheni abantu abane-ADHD banokungenwa yingozi ekuziphatheni koxhatshazo. Izikhokelo zovavanyo zinikezelwa ukunceda abagqirha bahluke iimpawu zokuxhatshazwa koxhatshazo kwi-ADHD yabantu abadala. Ekugqibeleni, iingcebiso zenziwa unyango lwe-ADHD yabantu abadala.
Shayer, M., Ginsburg, D. kunye noCoe, R, Iminyaka engamashumi amathathu - isiphumo esikhulu sokulwa neFlynn? Umthamo wovavanyo wePiagetian kunye nomgangatho wobunzima 1975-2003. Ijenali yaseBritane yezeNzululwazi yezeMfundo, 2007, 77: 25-41. I-doi: 10.1348 / 000709906X96987
Imvelaphi. Umthamo kunye nobunzima yayiyenye yeemvavanyo ezintathu ze-Piagetian ezisetyenziswe kuvavanyo lwe-CSMS ngo-1975/76. Nangona kunjalo ngokungafaniyo novavanyo lwe-psychometric olubonisa isiphumo se-Flynn-oko kukuthi abafundi babonisa ukuphucuka okuzinzileyo unyaka nonyaka abafuna ukuba iimvavanyo zibuyiselwe umva-kwabonakala ngathi ukusebenza kwabafundi be-Y7 kutshanje kuya kusiba kubi.
Iinjongo. Isampula yezikolo ngokwaneleyo kwaye ummeli wakhethwa ukuba i-hypothesis yokusebenza kancinci ingahlolwa, kwaye iqikelelwa ngokulinganayo.
Isampulu. Amashumi amathandathu anesithoba amaqela ezikolo e-Y7 aqukethe idatha yomfundi kuvavanyo lweVolumu kunye nobunzima kunye novavanyo lweDyunivesithi yaseDurham CEM Centre MidYIS babekwa benika isampulu yabafundi abayi-10, 023 abagubungela iminyaka 2000 ukuya ku-2003.
Indlela. Ukunyanzelwa kwesikolo sabafundi kuthetha uMthamo kunye nobunzima kwizikolo 'kuthetha ukuba amanqaku akumgangatho ophakathi we-MidYIS 1999, kunye nokubala ukuhlengahlengiswa kwi-MidYS = 100 kuvumela ukuthelekiswa noko kwafunyanwa kwi-1976.
Iziphumo. Iintsingiselo zokuhla kwamanqaku ukusuka kwi-1976 ukuya kwi-2003 yayingamakhwenkwe = 1.13 kunye namantombazana = amanqanaba e-0.6. Umahluko we-0.50 yokutenxa kumgangatho oqhelekileyo wokuxhasa amakhwenkwe ngo-1976 wawusele wanyamalala ngokupheleleyo ngonyaka ka-2002. Phakathi kowe-1976 nowama-2003 ubukhulu bethontsi lokwehla kwamakhwenkwe ekusebenzeni yayikukuphambuka okusemgangathweni okuyi-1.04, kwaye kumantombazana kwaba kukuphambuka okusemgangathweni okuyi-0.55.
Isiphelo. Ingcamango yokuba abantwana abasuka ezikolweni eziprayimari bafumana ngakumbi kwaye banengqondo-nokuba ingajongwa ngokwempembelelo yeFlynn, okanye ngokwemanani ekarhulumente ekusebenzeni kwiStyiki esinqununu i-2 SATS kwimathematika nasenzululwazi - ibuzwa ezi ziphumo.
Singleton O, Hölzel BK, Vangel M, Brach N, Carmody J kunye Lazar SW. Utshintsho kwi-Brainstem Grey Focus Concentration Emva kokungenelela kwengqondo kuhambelaniswe nokuPhuculwa kweZengqondo- in Imida ye-Human Neuroscience, 2014 Feb 18; 8: 33. i-doi: 10.3389 / fnhum.2014.00033. (Ukuyeka i-Porn)
Abantu banokuphucula amazinga abo entlalo-ntsapho (PWB) ngokusebenzisa ukusetyenziswa ngoncedo lwengqondo, kubandakanywa nokucamngca kwengqiqo, echazwa njengengcaciso engeyiyo yokugweba ngamava okwangoku. Satshanje ingxelo yokuba i-8 ye-week-based-stress-reduction based stress reduction (MBSR) ikhokelela ekunyuseni kwimiba egciniweyo kwiinkalo ezininzi zeengqondo, njengoko zifunyenwe nge-voxel-based based morphometry of magnetization elungiselelwe ukufumana ngokukhawuleza i-MX scanning echo, i-Mons / raphe / locus coeruleus kwindawo yengqondo. Ukunikezelwa kwendima yeepons kunye ne-raphe e-mood kunye nokuvusa, sithemba ukuba utshintsho kulommandla lunokuthi lube neenguqu zokuphila kakuhle. I-subset ye-14 yabantu abasempilweni abavela kwisiseko sedatha esashicilelwe ngaphambili esagqiba i-MRI ye-anatomiki kwaye bazalise isilinganiselo se-PWB ngaphambi nangemva kokubamba iqhaza kwe-MBSR. Utshintsho lwe-PWB lwalusetyenziselwa ukuguqulwa kwangaphambili kwintshintsho yobuninzi bobunzima phakathi kwezi ndawo zengqondo ezazikade zibonise utshintsho lwe-MBSR ngaphambili. Iziphumo zabonisa ukuba amanqaku kumahlanu e-PWB kunye nePWB amanqaku apheleleyo ayenyuka kakhulu kwikhosi ye-MBSR. Utshintsho lwalunxulumene kakuhle nombono wegrey ingxininiso yanda kwiindidi zombini ezihambelanayo kwi-brainstem. Ezi zigaba zibonakala ziqulethe indawo ye-pontine tegmentum, indawo ye-locus coeruleus, i-nucleus raphe pontis kunye ne-nucleus ye-trigeminal nucleus. Akukho ziqoqo ezihambelana kakubi kunye noshintsho kwi-PWB. Olu phofu lokuqala lubonisa ukuba i-neural correlate ye-PWB ephuculweyo. Iinkalo zengqondo ezichongiweyo zibandakanya iindawo zokuhlanganisa kunye nokukhululwa kwee-neurotransmitters, norepinephrine kunye ne-serotonin, ezibandakanyekayo kwimodemu yokuvusa kunye nemizwelo, kwaye idibene nemisebenzi eyahlukileyo yemisebenzi kunye neengxaki ezichaphazelekayo zeklinikhi.
Stewart DN, iSzymanski DM Iingxelo zeentombi zabasetyhini abasemadodaneni abo abathandana nabo abanobudlelwane babantu abathandana nabo basebenzisane njengama-Correlate of Self-Esteem, Ubunxulumano bezobudlelwane kunye nokuXhobisa ngokwesondo. in Imisebenzi yezesondo. 2012 Meyi 6; 67 (5-6): 257-71. (Ekhaya)
Iifoto zoonografi zixhaphake kwaye ziqheleke kwiinkcubeko ezininzi emhlabeni jikelele, kubandakanywa nenkcubeko yaseMelika; Nangona kunjalo, omncinci uyaziwa malunga nempembelelo yengqondo kunye nezobudlelwane ezinokuba nazo kubafazi abasetyhini abatsha ababandakanyekayo ekuthandaneni ngokuthandana nomfazi kunye nabalingani babo besilisa abajonga iifoto zoonografi. Injongo yale sifundo yayikuhlolisisa ubudlelwane phakathi kokusetyenziswa koonografi kwamadoda, kokubini ubude kunye nokusetyenziswa kakubi, kwiimeko zabo zentsebenziswano kunye neentlalontle zabo zakwa-308 nabasetyhini abadala abadala. Ukongezelela, iipropati ze-psychometric zeZibonelelo zoThatywayo zoMlingani oThatywayo Sebenzisa isiXhobo sinikezelwa. Abathathi-nxaxheba baqeshwe kwiyunivesithi enkulu yaseMerika e-United States baza bagqiba uphando lwe-intanethi. Iziphumo zabonisa ukuba iingxelo zabasetyhini zentsebenziswano yabo yecalaphini basebenziselwe kakubi kunye nobuhlobo babo bomgangatho. Umbono ogqithisileyo wokusetyenziswa kakubi kweentlophu zoonografi kwakunxulumene nokuzithemba, ubuhlobo bolwalamano, kunye nokwaneliseka ngokwesini. Ukongezelela, ukuzithemba ngokukhawuleza kulwalamano phakathi kweembono zeengxaki zoonopopasho ezisetyenziswayo kunye nobuhlobo bomtshato. Ekugqibeleni, iziphumo zityhila ukuba ubude bobudlelwane buyihlolisisa ubudlelwane phakathi kweembono zeengxaki zoononophala kunye nokuxhaswa ngokwesini, ngokunganeliseki okukhulu kunxulumene nobude obude.
I-Sun C, iBridges A, uJohnason J no-Ezzell M Iifografi kunye neSkripthi seSondo soBuntu: Uhlalutyo loTywala kunye noBudlelwane bezoSondo in I-Archives of Sexual behavior kuqala kwi-Intanethi: 03 December 2014, iphe 1-12. (IMpilo)
Iifoto zoonografi ziye zaba ngumthombo oyintloko wemfundo yesondo. Ngexesha elifanayo, uonografi oqhelekileyo wezorhwebo unxulumene nombhalo ohambelana nolwaphulo kunye nokuhlaziywa kwabesifazane. Sekunjalo, umsebenzi omncinci ukwenzile ukuhlolisana nemibutho ephakathi koononografi kunye nobudlelwane bezocansi. Iingcamango zesicatshulwa seengcamango zichaza izikripthi zeendaba zidala imodeli efumanekayo yokufumana izigqibo. Xa umsebenzisi elindileyo ebhala i-script yesigidimi esithile, ngokugqithiseleyo ezo khowudi zokuziphatha ziba kwiingcamango zabo zehlabathi kwaye mhlawumbi ziya kusebenzisa ezo mpendulo ukuze zisebenze kumava okwenene okuphila. Siphikisana noononografi kudala isicatshulwa sesini esilungiselela amava ezesondo. Ukuvavanya oku, sihlolisise amadoda asekholeji e-487 (iminyaka eyi-18-29) eUnited States ukuthelekisa izinga labo lezentlalo zoononophelo ezisetyenziselwa ukhetho lwezesondo kunye nokukhathazeka. Iziphumo zabonisa ukuba uonografi umntu obukeleyo, mhlawumbi wayeyisebenzise ngexesha lokwebelana ngesondo, acele izenzo zobulili zobunini bobulili obukhethekileyo, udibanise ngamabomu imifanekiso yeentlobano zesini ngexesha lokwabelana ngesondo ukuze ahlale evukekileyo, kwaye abe nexhalabisayo kwindlela yakhe yesini kunye nomzimba umfanekiso. Ukongezelela, ukusetyenziswa koonografi okugqithisileyo kwakunxulumene kakubi kunye nokuzonwabisa ngokuziphatha ngokwesini kunye neqabane. Siphetha ukuba ukuononografi kunika imodeli enamandla enokuthi ibandakanyeke ekulindeni kwamadoda kunye nokuziphatha ngexesha leentlanganiso zesini.
I-Sun C, iMiezan E, uLee NY kunye neShim JW Ukusetyenziswa kwezithombe zoononografi zaseKorea, Inzala yabo kwiZithombe zoonografi ezigqithiseleyo kunye nobudlelwane bobulili beDyadic in I-International Journal Yempilo Yesondo, Umqulu 27, I-1, iphepha le-2015 16-35. INGXELO: 10.1080 / 19317611.2014.927048 Ipapashwe kwi-Intanethi: 20 Nov 2014. (IMpilo)
Iinjongo: Injongo yesifundo kwakukuhlolisisa ukudibanisa phakathi kokusetyenziswa kweentlophu zoonografi (zombini ubukhulu kunye nomdla kwimifanekiso engamanyala obunzulu) kunye nobudlelwane bobudlelwane bezesondo. Iindlela: Amanqaku asibhozo anamanci asibhozo anesithandathu amaxhatshazo aseMzantsi Korea asekholeji abathathe inxaxheba kwiseshoni ye-intanethi. Iziphumo: Ininzi (i-84.5%) yabaphenduli bebukele iiporografi, kunye nabo babecala (abaxhamli be-470), safumanisa ukuba umdla ophezulu kakhulu ekuhlambiseni okanye ukugqithisa okugqithisileyo kwakudibaniswe namava okudlala umdlalo wesondo kwizinto ezingcolileyo. iqabane, kunye nokukhetha ukusebenzisa iinthombe zoonografi ukufezekisa nokugcina uxhamlo lwezesondo ngokulala ngesondo kunye nomlingane. Izigqibo: Iziphumo zazingqinelana kodwa zohlukwano ukusuka kwisifundo se-US ngendlela efanayo, ebonisa ukuba ingqalelo kufuneka ihlawulwe kwiinkcubeko ezahlukeneyo.
Sutton KS, Stratton N, uPytyck J, Kolla NJ, uJanor JM Iimpawu zoMonde ngesimo soBungqina boBucala boBucala boBucala: Ubungakanani beeTriki zokuHlola ze-115 eziPhathelene neziTyala eziMadoda in J Sex Sex Ther. 2015 Dec;41(6):563–80. (Home)
Ubundlobongela obuhlala bubuninzi buhlala buninzi ngokuqhelekileyo kodwa bengaqondi kakuhle isikhalazo somguli. Nangona ulwahluke kwiinkcazo zonyango zezigulana ezibhekiswe kwi-hypersexual, uncwadi luye lwagcina iindlela zokunyango ezithathwa ukuba zisebenzise yonke into. Le ndlela ibonakalise ingaphumeleli, nangona ifunyenwe kwisithuba seminyaka emininzi. Uphononongo lwangoku lusebenzise iindlela zokujonga iindawo zabantu, impilo yengqondo, kunye ne-sexological correlates yeekliniki eziqhelekileyo zokudluliselwa koxhatshazo ngokwesini. Iziphumo zixhasa ukukholwa kwamacandelo, nganye neenkalo ezihlukeneyo zeempawu. Ama-hypersexuals aseParaphilic abike inani elininzi labalingani bezesondo, ukusetyenziswa kakubi kwezidakamizwa, ukuqaliswa kwintsebenzo yesondo ngexesha elidala, kunye nobuhle njengendlela yokuqhuba ukuziphatha ngokwesondo. Ukugwema i-masturbator kubonisa amanqanaba amakhulu okuxhalabisa, ukunyanzeliswa kokukhawuleza, kunye nokusetyenziswa kwesondo njengecwangciso lokuphepha. Iziphingi ezingapheliyo zichazwe ngokukhawuleza kwangaphambili kwaye emva kokuqala kokukhulelwa. Izigulane ezikhethiweyo zazingenakwenzeka ukuba zichaze ukusetyenziswa kakubi kweziyobisi, umsebenzi, okanye iingxaki zezemali. Nangona kunjalo, eli nqaku linikeza isifundo esichazayo apho i-typology ebonakalayo ivela kwizinto ezininzi eziqhelekileyo ekuhloleni kwezesondo. Izifundo zexesha elizayo zingasebenzisa iindlela zobuchule bokubala, ezifana nokuhlalutya kwamagqabantshintshi, ukuqinisekisa ukuba ziphi na iindlela ezifanayo ezivela xa zihlolwe ngempumelelo.
I-critique yale nqaku ikhoyo Apha.
Svedin CG, uAkerman no-Priebe G Abasebenzisa rhoqo iifoto zoonografi. Isifundo esisisigxina se-epidemiologist of Swedish boy in Umbhalo we-Adolescence, Umqulu 34, I-4, Agasti 2011, i-779-788. I-doi: 10.1016 / j.adolescence.2010.04.010. (IMpilo)
Ukusetyenziswa rhoqo koonografi akuzange kufundwe ngokwaneleyo ngaphambili. Kwisifundo seSweden abafundi be-2015 abaneminyaka engama-18 minyaka bathatha inxaxheba. Iqela labantu abasebenzisa rhoqo i-pornography (N = 200, i-10.5%) yafundiswa ngokumalunga nemvelaphi kunye neengxaki zeengqondo. Abasebenzisi abaqhelekileyo banesimo sengqondo esilungileyo kwiimifanekiso engamanyala, babedla ngokuphindaphindiweyo "ukubukela iphonografi baze bajonge iifom ebonakalayo ezigqithiseleyo. Ukusetyenziswa rhoqo kwakunxulumene neendlela ezininzi zokuziphatha. Uhlalutyo oluninzi lweengxaki zokurhweba lubonisa ukuba abasebenzisi abaqhelekileyo bezononografi bekunokwenzeka ukuba bahlala kwisixeko esikhulu, badla utywala ngokuphindaphindiweyo, banomdla omkhulu wesondo kwaye bahlala bathengisa ngesondo kunabanye abafana abaneminyaka efanayo.
Ukujonga ngokugqithiseleyo ukujonga izinto ezingcolileyo kungabonwa njengendlela yokuziphatha engxaki efuna ukunakwa ngakumbi kubazali kunye nootitshala kunye nokujongana neengxoxo zonyango.
Valliant, GE Ukuphumelela kwamava: Amadoda eSifundo se-Grant Grant. 2012 IHarvard University Press. ISBN 9780674059825. (Ubudlelwane)
Inkcazo yoMshicileli wencwadi
Ngexesha apho abantu abaninzi emhlabeni jikelele behlala kwishumi labo elishumi, ukufundwa kwexesha elide kunabo bonke ophuhliso lwabantu luye lwaqalisa ukunikezela ngeendaba ezamkelekileyo zokudala ubudala: ubomi bethu buyaqhubeka nokuguquka kwiminyaka yethu emva, kwaye kaninzi luya kuzaliseka kunaphambili.
Ukuqala kwi-1938, iSifundo soBonelelo loPhuhliso lwaBadala sathintele impilo yengqondo kunye nemvakalelo yabantu abangaphezu kwama-200, ngokuqala ngeentsuku zabo zokuqala. I-Adaptation to Life now-classic echazwe ngobomi besilisa ukuya kwi-55 ubudala kwaye yasiza ukuba siqonde ukukhula komntu omdala. Ngoku uGeorge Vaillant ulandela abo bantu kwiminyaka yabo engama-90, ukubhalwa okokuqala oko kukuthandayo ukuphumelela ngaphaya komhlala phantsi.
Ukuxela kuzo zonke iinkalo zobomi besilisa, kubandakanya ubudlelwane, ezopolitiko kunye nenkolo, izicwangciso zokusebenzisana kunye nokusetyenziswa kotywala (ukusetyenziswa kakubi kweyona nto iphazamisa kakhulu impilo kunye nolonwabo kwizifundo zezifundo), Ukuphumelela kweZibonelelo kubelana ngeziganeko ezimangalisayo. Ngokomzekelo, abantu abaqhuba kakuhle ekugugeni abazange benze ngokufanelekileyo kwimpilo yabo, kwaye ngokufanayo. Nangona uphando luqinisekisa ukuba ukuphulukana ebuntwaneni obunobunzima bunokwenzeka, iinkumbulo zobuntwaba obonwabileyo ngumthombo wamandla onke. Imitshato ivelisa ukwaneliseka ngakumbi emva kweminyaka eyi-70, kunye nokuguga emva kokuba i-80 inqunywe ubuncinci ngaphezu kwemikhwa eyenziwe ngaphambi kwe50 yobudala. Ikhredithi yokuba ikhulile ngobabalo kunye nobunzima, kubonakala ngathi ihamba ngokwethu kunokuba i-stellar formtic makeup.
I-voon V, i-Mole Mole, i-Banca P, i-Porter L, i-Morris L, iMitchell S, et al. I-Neural Correlates ye-Reac Reactivity Reactivity kuBantu ngabanye kunye nabangenazo izinto ezinokunyanzelisa ngokwesondo. in PLoS ONE. : I 2014 Jul 11; 9 (7): e102419. (Ekhaya)
Nangona ukuziphatha ngokunyanzela ngokwesondo (CSB) kuye kwacatshulwa njenge-"addicted" kwaye izikhokelo eziqhelekileyo okanye ezidibeneyo zijikeleze ukulungiswa kwembuyekezo yemvelo kunye neziyobisi, akukho nto iyaziwa malunga nezimpendulo kwizinto zokuzichaza ngesondo kubantu ngabanye abangenayo i-CSB. Apha, ukucutshungulwa kweziqulatho zomxholo wezesondo kwahlolwa kubantu abane-CSB, egxininisa kwimimandla ye-neural echazwe kwizifundo zangaphambili zokusetyenziswa kwezidakamizwa. Izifundo ze-19 CSB kunye namavolontiya anempilo e-19 ahlolwe asebenzisa i-MRI esebenzayo ngokuthelekisa iividiyo ezicacileyo zesini kunye namavidiyo angabonakali ngesondo. Ukulinganiswa komnqweno wesondo kunye nokuthandana kwafunyanwa. Ngokumalunga namavolontiya anempilo, izifundo ze-CSB zinomnqweno omkhulu kodwa amanqaku afanayo afana nokuphendula kwividiyo ezicacileyo zesondo. Ukuboniswa kwimiba ecacileyo ngokwesini kwi-CSB ngokuthelekiswa nezifundo ezingezizo ze-CSB zidibene nokusebenziselwa ukukhwabanisa kwangaphambili, i-ventral striatum kunye ne-amygdala. Ukuhlanganiswa okusebenzayo kwe-intanethi ye-stingum-ventral striatum-amygdala inethiwekhi yayixhomekeke kwisifiso sokuziphatha ngokwesini (kodwa singathandi) kwizinga eliphezulu kwi-CSB ngokumalunga nezifundo ezingezizo ze-CSB. Ukwahlukana phakathi komnqweno okanye ukufunwa nokuthanda kufana neengcamango zokukhuthaza izizathu ezibangelwa yi-CSB njengobungozi beziyobisi. Ulwahlulo lwama-Neural ekusebenzisweni kwe-sex-cue reactivity lwaye lwafunyanwa kwizifundo ze-CSB kwimimandla ebekwe ngaphambili ekufundiseni izidakamizwa. Ukubandakanya okukhulu kwesekethe ye-corticostriatal ii-CSB emva kokutshatyalaliswa kwimiba yesondo kubonisa iindlela ze-neural eziphantsi kwe-CSB kunye neenjongo zezinto eziphilayo zokungenelela.
Weaver JB, Weaver SS, iMeyile D, Hopkins GL, Kannenberg W, McBride D Izibonakaliso zempilo yengqondo kunye nempilo kunye nokuziphatha kweendlela zokusetyenziswa kwezemidlalo ngokubanzi ngabantu abadala in Umbhalo Wezobisi Zosondo. 2011 Mar;8(3):764–72.
INTSHAYELELO: Ukuguqulwa ubungqina obuvela kwimimandla eyahlukeneyo yenkcubeko kubonisa ukuba ukuziphatha kweendlela zokusebenzisa izondo (SEMB, oko kukuthi, ukusetyenziswa kwezonyanya) kuhambelana nemibono yezempilo yesondo kunye neendlela zokuziphatha, ezininzi ezibandakanya ingozi ephezulu yokudluliselwa kwe-HIV / STD.
I-AIM: Okungabalulekanga, kwaye kugxininiswe apha, ubuhlobo obunokwenzeka phakathi kwe-SEMB kunye neziboniso zempilo yengqondo kunye nezempilo.
IMISEBENZI YOKUPHATHWA KWEENKCUKACHA: Ukuhlukahluka kwezihlandlo ezithintekayo zempilo ezithandathu (iimpawu ezixinezelekileyo, iintsuku zempilo yengqondo kunye nezempilo ezincitshisiwe, isimo sempilo, umgangatho wobomi kunye nenani lenkcazo yomzimba) yahlolwa ngamanqanaba amabini (abasebenzisi, abangenayo i-SEMB).
INDLELA: Isampula ye-559 Seattle-Tacoma yabantu abadala basebenzisa i-2006. Amanqaku ahlukeneyo aphezulu aphezulu aphakanyisiweyo kwiSEMB ngumntu ophendulayo ngokwesini (2 × 2) ukuklanywa kwezinto zobugcisa kwakubalwa ukuquka ukulungiswa kwamanani amaninzi.
IINKCUKACHA: I-SEMB ibikwe ngu-36.7% (n = 205) yesampuli. Abasebenzisi abaninzi be-SEMB (78%) babengamadoda. Emva kokulungelelanisa abantu, abasebenzisi be-SEMB, xa kuthelekiswa nabangenayo, babika iimpawu ezidityanisiweyo zokubandezeleka, umgangatho wobomi obuthakathaka, iintsuku ezingaphantsi kweengqondo kunye nezempilo ezincitshiswayo, kunye nesimo sempilo esezantsi.
Iziphumo zibonisa ukuba izikhombisi zempilo yengqondo kunye nempilo ziyahluka kakhulu kwi-SEMB, iphakamisa ixabiso lokubandakanya ezi zinto kuphando lwexesha elizayo kunye neenkqubo zenkqubo. Ngokukodwa, iziphumo zibonisa ukuba iindlela zokukhuthaza ezempilo ezesondo ngaxeshanye zijongana ne-SEMB yabantu kunye neemfuno zabo zempilo yengqondo kunokuba yindlela elungileyo yokuphucula impilo yengqondo kunye nokujongana neziphumo ezinokuthintelwa zempilo yezesondo ezinxulumene ne-SEMB.
U-Weber M, Ukufuna UO kunye noDaschmann G Peers, Abazali kunye noonografi: Ukuhlolisisa Ukuboniswa Kwengqondo Yengane Yomzimba kwizinto ezizicatshulwa ngokwesondo kunye neCorrelates yayo yophuhliso in Isini kunye neNkcubeko, UDisemba 2012, Umqulu 16, I-4, i-408-427. (IMpilo)
Ngesiseko sophando lwe-intanethi ye-352 abaselula abaneminyaka ephakathi kwe-16 kunye ne-19, ukusetyenziswa kweefowuni zevidiyo zoononografi kunye neefilimu zaphandwa kunye nokudibanisa phakathi kokusetyenziswa kunye nezibonakaliso zokuzimela komntu osetsheni, iimpembelelo zeqela labalandeli kunye neengcamango zesini. Sifumene ukuba abaninzi abaselula bayasebenzisa ividyo zevidiyo okanye iifilimu. Abaphenduli abazijonga njengabazimeleyo phantsi kwendawo yabo, ingakumbi abazali babo, basebenzisa iinthombe zoononophelo rhoqo. Kwabamantombazana, oku kusebenza xa bavavanya ukusetyenziswa phakathi kweqela labanontanga ngokubanzi ngokubanzi, kunye namakhwenkwe, ukuba bahlala bexubusha iinthombe zoononophelo ngaphakathi kweqela labanontanga. Umgangatho ophezulu wokusetyenziswa kwamacandelo oonondaba ngokuphathelele ngokwesondo nawo uyahamba kunye nokucinga ukuba abantu ngokubanzi balala ngesondo ebomini kwaye abantu ngokubanzi bayathanda iindlela ezahlukeneyo zesondo.
UWilson, uGary 2014 Ubuchopho Bakho Kwi-Porn: I-Internet Yezoonografi kunye neSayensi Ephuthumayo YokuLungisa, I-Commonwealth Publishing ISBN 978-0-9931616-0-5
Ubungqina bakho kwi-Porn bubhaliwe ngolwimi olucacileyo olufanelekileyo olulungileyo kunye nolwazi olufanayo kwaye lugxininiswe ngokuqinile kwimigaqo ye-neuroscience, i-psychology yokuziphatha kunye nenkolelo yokuziphendukela kwemvelo ... Njengengqondo yengqondo, ndichithe iminyaka engaphezu kwamashumi amane ndiphanda ngeziseko zokukhuthaza kwaye ndiyakwazi ukuqinisekisa ukuba uhlalutyo lukaWilson luhambelana kakuhle nento yonke endiyifumeneyo. "
UNjingalwazi uFrederick Toates, iYunivesithi Evulekileyo, umbhali weZenzo zoLwabelana ngesondo: I-Enigmatic Urge.
Iyatholakala ukuthenga ukusuka Umvakalisi.
Wright PJ, Sun C, Steffen NJ kunye neTokunaga RS Uphonografi, Utywala, kunye nokuSondeza ngokwesini kwiNxibelelwano yeMonographs Umqulu 82, I-2, ii-2015 amakhasi 252-270. Ishicilelwe kwi-Intanethi: 19 Nov 2014. INGXELO: 10.1080 / 03637751.2014.981558. (IMpilo)
Olu phononongo luvavanye umdla wamadoda athandana namanye amadoda aseJamani kunye nokuzibandakanya kwiindlela ezahlukeneyo zokuziphatha eziqwalaselwe kuhlalutyo lwamva nje lwephonografi. Inzala ekubukeleni iifilimu zoononografi ezithandwayo okanye ukusetyenziswa rhoqo koonografi kwakunxulunyaniswa nomnqweno wamadoda wokuzibandakanya okanye esele uzibandakanye neendlela zokuziphatha ezinjengokutsala iinwele, ukubetha iqabane lakho ngokwaneleyo ukushiya uphawu, ukuphuma ebusweni, ukuvalelwa, ukungena kabini ( okt ukungena kwi-anus okanye kwilungu lobufazi leqabane lakho ngaxeshanye nenye indoda), i-ass-to-mouth (okt ukungenisa ngaphakathi iqabane emva koko ufake ilungu lobudoda ngqo emlonyeni wakhe), ukugoba i-penile, ukubetha ebusweni, ukukrwitsha kunye nokubiza amagama (umz. isileyi ”okanye“ isifebe ”). Ngokuhambelana nophando olwenziweyo lokuvavanya isiphumo sotywala kunye nokubonisa iphonografi kumathuba okuba amadoda anyanzeliswe ngokwesini, amadoda awayeziphatha gwenxa kakhulu ngabo babesoloko besebenzisa iphonografi kwaye babesela rhoqo utywala ngaphambi okanye ngexesha lokwabelana ngesondo.
Eli nqaku lifumaneka ukujonga i-free Apha.